I-Verdes ehlaziyiweyo yiwebhusayithi yeBhlogidad blog ezikhethekileyo kumandla ahlaziyekayo kunye nokusingqongileyo. Siphatha ngokuchanekileyo amandla onke aseplanethi kwaye siwathelekise nalawo aqhelekileyo. Singumphakathi okhethekileyo onika ulwazi oluyinyani nolungqongqo.
Iqela lokuhlela leRovable Verdes lenziwe liqela le iingcali kumandla ahlaziyekayo, acocekileyo naluhlaza, phakathi kwabo abaphumelele kwisayensi yezendalo. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela, unako sithumele le fomu ukuba sibe ngumhleli.
Abaphumelele kwiNzululwazi yezeNdalo kunye neMasters kwiMfundo yokusiNgqongileyo kwiDyunivesithi yaseMalaga. Umhlaba wamandla ahlaziyekayo uyakhula kwaye uya usiba ngakumbi kwiimarike zamandla kwihlabathi liphela. Ndifunde amakhulu eejenali zesayensi kumandla ahlaziyekayo kwaye kwinqanaba lam bendinezifundo ezininzi ekusebenzeni kwazo. Ukongeza, ndiqeqeshwe ngokubanzi kwimicimbi yokurisayikilisha neyokusingqongileyo, ke apha unokufumana olona lwazi lubalaseleyo malunga nayo.
Ukuthanda itekhnoloji kunye nesayensi yenziwe yafumaneka kwindalo kunye nokusingqongileyo. Igcisa ekuthinteleni umngcipheko womsebenzi kwinkampani kunye nochwephesha kulawulo lokusingqongileyo.
Injineli yeKhompyuter inomdla woqoqosho lwehlabathi, ngakumbi iimarike zezemali kunye namandla ahlaziyekayo.
Ukuzibophelela kwindalo esingqongileyo kunye nendlela ekubaluleke ngayo ukugcina yonke into eyenzekayo emhlabeni nakwihlabathi. Ngenjongo yokubonelela ngokukhanya okungakumbi kokusijikelezileyo.